Waqtiga Bulshada | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 1, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan u halgamayaa inaan iskudarsado waqtiga maalintii oo dhan si aan ula dhaqmo dadyowga bulsho ahaan, waxaanan arkaa inay ku qaadato culeyskeeda xaddiga dadka aan gaarayo iyo la sheekaysiga. Argyle Bulsho waxay soo bandhigtay muuqaalkan dhalaalaya si ay uga caawiso fahamka sayniska ka dambeeya waqtiga iyo saameynta ay ku leedahay waxqabadka suuqgeynta warbaahinta bulshada ee ganacsiga iyo macaamilka (B2C) iyo ganacsiga ganacsiga (B2B).
Laga soo bilaabo infographic: Astaamaha waxay rabaan inay waqti dhejiyaan si ay u gaaraan kaqeybgalka ugu badan. Laakiin goormay macaamiishoodu aad u soo dhoweeyaan? Waxaan baarnay qayb ka mid ah xogta macmiilkeena - 250k dhajiye iyo 5M dhagsiinno - si aan u eegno haddii aan u aqoonsan karno isbeddellada isugeynta
Source: Suuqgeynta warbaahinta bulshada ee xogta kuxidhan Argyle Social
Nov 1, 2011 saacadu markay tahay 1:23 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida cilmi baaristayada, Doug!
Nov 1, 2011 saacadu markay tahay 3:26 PM
Waxaad sharad! Waxyaabo fiican, Eric!
Nov 2, 2011 saacadu markay tahay 11:16 PM
haye runtii runtii waan ku riyaaqay barta internetka waxaanan rajeynayaa inaan ku isticmaali karo fikradahan boggeyga!